Ndizidibanisa njani iibhokisi kwi-OneNote? - Onenote
Eyona > Onenote > Dibanisa iiseli-indlela yokujongana nayo
Ndizidibanisa njani iibhokisi kwi-OneNote?
Gcina phantsi SHIFT. Cofa kwisiphatho sokuhambisa sokuqalaPhawulacontainer, kwaye uyihudule ngaphezulu kwayo nayiphi na enyePhawulaisikhongozeli kwiphepha elinye. Xa imixholo yePhawulaizikhongozeli ziidityanisiwe, khupha iqhosha le-SHIFT.
Kudala ndisebenzisa i-OneNote kwiminyaka embalwa ngoku.
Esona sizathu siphambili yayikukucwangciswa ngakumbi. Uyabona, ndihlala ndicinga ngemisebenzi ekufuneka ndiyenzile. Ndinezimvo zamanqaku amatsha, kufuneka ndibhale phantsi igama leapp elitsha endixelelwe nje ngomnye umntu.
Ndiqokelele oku kwiindawo ezahlukeneyo kwaye akukho nanye ehambelana. Uninzi lwazo luye lwanyamalala emngxunyeni omnyama. Kweli nqaku ndiza kwabelana nawe malunga neengcebiso kunye namacebo e-OneNote kunye nendlela endithanda ukuyisebenzisa ngayo. (Upbeat music) Phambi kokuba siqale, enkosi ngokukhawuleza kwiSkillshare ngokuxhasa inqaku lanamhlanje.
ISkillshare liqonga lokufunda elinazo iikhosi ezininzi ezintle. Kwaye ndinekhonkco elikhethekileyo elikunika iinyanga ezimbini zokufikelela mahala. Ungayifumana kwinkcazo yeli nqaku.
Kodwa ndiza kuncokola ngakumbi malunga nayo kude kube sekupheleni ukuze uhlale ubukele. Ngoku masiqhubeke siye kwiingcebiso zethu. UDavid Allen, umbhali we 'Ukwenza Izinto zenziwe.' Incwadi enkulu ngendlela, kwaye ndiyacebisa kakhulu ukuba unomdla.
Inombolo yokuqala, Sebenzisa ii-hierarchies ukuzilungiselela. Eyona nto ibalulekileyo kwi-OneNote kukuba unokwenza olwakho uluhlu lolawulo. Kukho amanqanaba amathathu aphambili, elona nqanaba liphezulu lokuba yincwadi yokubhalela, kanye njengencwadi yokubhalela ebonakalayo, anokuqulatha amaphepha amaninzi ngamacandelo.
Apha sinendlela yokupheka i-rice mushroom burger yasendle. Sinezithako, imiyalelo kwaye sinokongeza imifanekiso kwaye sinxibelelanise nalapho sifumene khona iresiphi. Ngaphandle kwezi ndlela zokupheka, ndihlala ndibhala iincwadana ezinemibono yamacandelo ngamacandelo ahlukeneyo kuxhomekeke kwinkqubela phambili yakho, njengokucinga, ukuphanda, okanye ukubhala.
Ukuze uzisebenzise kufuneka ube namaphepha amabini ubuncinci kwicandelo elinikiweyo. Ke masithi apha ndinephepha elinamanqaku am entlanganiso avela kwiinkomfa ze-Excel, ndingenza i-Sub-P Age ngamanqaku ecandelo ngalinye. Ke ndinesiqwenga esibizwa ngokuba yiSession Notes kwiNkomfa ye-Excel eBulgaria kunye namaphepha aphantsi kwintlanganiso nganye.
Ukwenza amaphepha angaphantsi, cofa nje kwiphepha ofuna ukulijika libe likhasi eliphantsi kwaye ukhethe Yenza iphepha elingaphantsi lenze. Iya kuyenza indent isihloko. Unokufumana olunye ungqimba lwephepha elingaphantsi elithi I-Subpage ye-Subpage.
Andikusebenzisi rhoqo oku, kodwa ukuba unamanqaku amaninzi kwaye ufuna ulwakhiwo oluneenkcukacha, zinokuba luncedo kakhulu. Isishwankathelo, la ngamanqanaba ohlukeneyo olawulo olunokuba nawo. Incwadana yamanqaku, iqela lecandelo, icandelo, iphepha, ezantsi enye, ezantsi ezimbini.
Qalisa nje ngesakhiwo esivakalayo kuwe, ungasitshintsha rhoqo okanye usongeze kamva. Inani lesibini, sebenzisa iithegi ukufumana into oyifunayo. Iimpawu yindlela elungileyo yokuhlela kunye namaqela amanqaku angekho kwincwadi yamanqaku efanayo okanye icandelo kwinqaku lam amanqaku eencwadana zamanqaku, kule meko yombuzo wamandla, apho ndinamanqaku okufunda iziseko ze-M.
Masithi le yinto endifuna ukuyenza kungekudala. Ngokusebenzisa le Nqaku lokulahla ithegi ngasentla, ndingakhetha iithegi ezingagqibekanga ukongeza kwiinowuthsi okanye iinxalenye zeenowuthsi. Ke ndinokuphawula oku ngoKhumbula ixesha elizayo, ke musa ukulibala.
Kwenye incwadana yam yophando ndinephepha lokujonga le app yokufunda ibhakhowudi. Ndingayifaka le ncwadana kwithegi efanayo, Ndikukhumbuze kwangolo suku lunye, okt nangona bekwisigqeba esahlukileyo, basadityanisiwe kwaye kulula ukufumana amanqaku eethegi kamva.
Masithi ufuna ukuphonononga onke amanqaku aphawulwe ngokuGcina uKamva, konke okufuneka ukwenze kukucofa indawo yokukhangela ngasekhohlo apha, emva koko ucofe ibar yokukhangela kwaye ukhethe kwiithegi ezilapha ngezantsi ezicetyisiweyo. Okanye chwetheza nje into oyikhangelayo kwaye ukhethe usuku olifunayo. Uya kufumana uluhlu lwawo onke amanqaku aqulathe le thegi.
ikhowudi yempazamo 0x87e00005
Unokusebenzisa iithegi ezisemgangathweni, kodwa ndincoma ukuba wenze eyakho inkqubo yeethegi ngokusebenzisa iithegi zakho zesiko ngokunjalo. Konke okufuneka ukwenze kukucofa i-Yakha ithegi entsha emazantsi apha kwaye emva koko unokuyinika igama kwaye ukhethe i-icon yayo kwiithegi njengoko unokwenza kwiinguqulelo zangaphambili ze-OneNote. Ezintsha zihlala zongezwa apha ngezantsi, ke sukuya ngaphezulu kwaye ugcine inani leethegi zesiko lilinganiselwe.
Ke sebenzisa iithegi ukwahlula amanqaku. Zininzi izinto ezisetyenziswayo kwiithegi, zisebenzise nje ngokweemfuno zakho. Umzekelo, masithi ufuna ukugcina umkhondo wemisebenzi oyabele amalungu eqela lakho, okanye uwasebenzise ukuqaqambisa iinxalenye ezibalulekileyo kumanqaku akho esifundo.
Benza ukuba kube lula ukufumana into oyifunayo, xa uyifuna. Inombolo yesithathu, jot izimvo phantsi kunye namanqaku ancangathi kuyo yonke indawo. Nanini na xa ndiphumile, ndiza kubhala izinto endingafuni kuzilibala ephepheni, emva koko zilahlekile okanye ndichithe ixesha elininzi ndikhangela emqolo, akukho nto iyenye.
Ndifumene amanqaku e-Sticky. I-Sticky Not's zakhelwe kwi-OneNote usetyenziso kwifowuni. Ke ukuba ndifuna ukubhala into ngokukhawuleza, ndivula i-OneNote kwaye ndicofe amaqhosha, amaNqaku aNcameneyo apha ngezantsi, kwaye ndiqale ndichwetheze.
Uya kuyifumana njengesixhobo esahlukileyo kwikhompyuter yakho okanye kwiLaptop, ngelixa liyinxalenye ye-OneNote app kwifowuni yakho ephathekayo kwaye ilungelelaniswe ngokuzenzekelayo ukuze uhlale unamanqaku akho kunye nawe, nokuba ubuyise phi. Inani lesine, khipha isicatshulwa kwimifanekiso. Enye into ebalulekileyo kukuBonwa ngoBuntu oBonakalayo, okanye umfanekiso we-OCR, d Oku kunezibonelelo ezibini ezilungileyo, inombolo yokuqala, unokukopa isicatshulwa kwimifanekiso ukuze ungachwethezi ngesandla.
i-astroneer crossplay umphunga
Umsebenzi we-OCR ukhangela okubhaliweyo kumfanekiso kwaye ubonise lonke ulwazi olufanelekileyo, kubandakanya imifanekiso. Inani lesihlanu, gxila kwi-Immersive Reader. Eyona nto ndiyithandayo ukuyisebenzisa xa ndifuna ukugxila kwisicatshulwa okanye ekufundisiseni ukuphinda ufunde iImersive Reader.
Ngoku idityaniswe nokusetyenziswa okuninzi njengeLizwi, i-Outlook kunye ne-OneNote. Xa ukwiphepha, kwithebhu yokuJonga, ucofa i-Immersive Reader yenza kube lula kwaye ikhawuleze ukuyifunda. Ungalutshintsha useto lobungakanani bokubhaliweyo kunye nemixholo yombala ngendlela othanda ngayo.
Kulapho unokutshintsha khona ifonti, kwaye inomdla ziiComic Sans, ifonti enokuthi ingakhange ibonakale inomtsalane kuseto lobungcali kodwa isebenza kakhulu kubantwana kwaye imile ngo-G yindlela abantwana abafunda ngayo ukubhala esikolweni. Unokusebenzisa oku ukuziqhelanisa nokufunda nabantwana bakho. Unokusebenzisa iqhosha lokudlala elingezantsi kwaye ubhalelwe itekisi ngokuvakalayo.
Ngokwam, ndisebenzisa i-OneNote. Kodwa mininzi imisebenzi enokuba luncedo kakhulu kuxhomekeke kwiimfuno zakho. Umzekelo, ungazoba iimilo ngesandla emva koko ufake i-inki kubume, kwaye i-OneNote iya kuziguqula ngokuzenzekelayo zibe ziimilo ngemigca ethe tye kwaye iikona ezicocekileyo zinokuguqula ukubhala kwakho kube ngumbhalo ochwetheziweyo, bendikrokrela kuba ndinombhalo owoyikekayo, kodwa iyakwazi ukuguqula eyam.
Kuqala, sebenzisa ukhetho lwe-lasso ukukhetha into ofuna ukuyiguqula, emva koko ucofe i-Ink to Text apha. Andilisebenzisi eli nqaku rhoqo kuba ndichwetheza ngokukhawuleza, kodwa kunokuba luncedo ukuba ukhetha ukubhala amanqaku akho ngesandla. Unokusebenzisa i-OneNote kwiingxaki zezibalo.
Ungabhala ngesandla i-equation, usebenzise ukhetho lwe-lasso ukuyikhetha, emva koko ucofe iMath. Inki kwiMathematika apha ngasentla inokuyiguqula ibe sisicatshulwa esibhaliweyo. Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto, ungabuza ngenene, ucofe ukhetho kwaye usombulule ubalo.
Kwaye ukuba unomdla, ungabonisa unyana womntwana wakho ukuba angayisombulula njani. Kulungile ukuphola? Musa ukubaxelela ootitshala bakho. Kukho iinguqulelo ezahlukeneyo ze-OneNote njenge-One okanye i-2013 okanye i-OneNote 2016.
Kodwa ingxelo esemthethweni yohlelo lokusebenza ngoku ibizwa ngokuba yi-OneNote. Iyafumaneka kwiWindows. Kwaye nakwiMac Plus, isimahla kwaye iyavumelanisa kuzo zonke izixhobo zakho.
Ke, njengoko ubona, zikhona zonke iindlela onokusebenzisa ngazo i-OneNote ukuze uzilungiselele ngakumbi kwaye uvelise imveliso. Ukuba unento oyithandayo, yabelana nathi apha ngezantsi, kwaye ukuba unento entsha yokwabelana ne-OneNote endingakhange ndiyigubungele kweli nqaku, yabelana nangezantsi. Ukuba ufana nam kwaye ufuna ukufezekisa ngaphezulu ngexesha elincinci, ndincoma ukuthatha iikhosi zemveliso kwiSkillshare.
ISkillshare ibonelela ngamawaka ezifundo ezikhuthazayo kunye nezihloko, kubandakanya imveliso, ukuzimela, izakhono zobuchwephesha njengezakhono zeofisi, nokunye okuninzi. Esinye sezifundo zokugqibela endazithathayo eSkillshare yayiyimveliso elula, indlela yokwenza okungakumbi ngokuncinci. Le khosi indenze ndacinga kabini malunga noluhlu lwam lwemihla ngemihla.
Ndifumanise ukuba ayisiyongxaki endiyenzileyo ngexesha elithile, kodwa malunga nokuthatha isigqibo sokuba zeziphi izinto ezibalulekileyo, kwaye akukho lula, kuba yonke into ibalulekile ekuqaleni. Ndiyazixabisa kakhulu izixhobo, ekwabelwana ngazo kule khosi ukundinceda. Ukuba unomdla wokuthatha le khosi okanye amanye amawaka eeklasi kwi-Skillshare, cofa kwikhonkco kwibhokisi yenkcazo engezantsi ukufumana ubulungu beprimiyamu yasimahla yeenyanga ezimbini ekunika ukufikelela okungenamda.
Emva kweenyanga ezimbini, umrhumo wonyaka ubiza imali engaphantsi kweedola ezili-10 ngenyanga, eyenza ukuba ukufunda izakhono ezintsha kufikeleleke. Enkosi ngokubukela kwaye ndiyathemba ukuba eli nqaku likunike izimvo zokuba ungayisebenzisa njani i-OneNote ukuphucula iinkqubo zakho zemihla ngemihla. Ukuba uyithandile, yinike isithupha.
Kwaye cinga ukubhalisa ukuba uyayithanda into oyibonayo kule jelo kwaye ufuna ukufunda izakhono ezitsha. Kwaye ndiza kukubona kwinqaku elilandelayo. (umculo omnandi)
Udibanisa njani iiseli kumaqela?
Cofa kwindawo yokuqalaiselikwaye ucinezele iShift ngelixa ucofa eyokugqibelaiselikuluhlu olufunayohamba. Kubalulekile: Qiniseka ukuba inye kuphela kwifayile ye-iiselikuluhlu unedatha.
Cofa kwiKhaya>Yiya& IZiko.
Wamkelekile! Kule nqaku yokufunda siza kubona indlela yokudibanisa imixholo yeeseli ezimbini, kule meko igama lokuqala kunye negama losapho (okanye lokugqibela) - enkosi apho sidibanise igama elipheleleyo kwiseli enye enomdla kuyo? Makhe sibone ukuba kuhamba njani! Molo! Kwaye wamkelekile kwi-EasyClick Academy! Igama lam ndinguFrank kunye neqela lethu le-EasyClick silapha ukuze siqiniseke ukuba ungasebenzisa i-Excel ngokukhawuleza nangokulula enkosi kwii-tutorials zethu ezilula ukulandela inqaku ndiza kukubonisa le tafile imfutshane yedatha siyenzayo ukwenza konke amanyathelo afunekayo ukudibanisa amagama kwi-Excel.
Khumbula, ubungakanani betafile abukunciphisi-ungasebenza ngezintlu ixesha elide, eligcina ixesha lakho kwaye lithintele ukukopa kunye nokuncamathisela isiqwenga sedatha. Ngaba kufuneka siqale? Kuqala, khetha apho ufuna ukuba igama elipheleleyo elihlanganisiweyo livele. Cofa kwiseli ekhethiweyo-sicofa iseli D3 Emva koko ucofe iqhosha le-fx elapha ngasentla, elisetyenziselwa ukufaka umsebenzi
Kwiwindow ephumayo, khetha udidi 'Zonke' kwaye ujonge umsebenzi we 'CONNECT'. Qinisekisa ngo-OK. Umsebenzi 'JOIN' unokudibanisa ukuya kuma-255 yezinto ezahlukeneyo kwiseli enye.
Okwangoku, i-Excel ibonelela kuphela ngamacandelo amabini- 'Umbhalo 1' kunye 'Nombhalo 2'. Kulapho ungadibanisa khona idatha oyifunayo. Sukuba nexhala lokuba ufuna ukudibanisa ngaphezulu kwezinto ezimbini ezikuluhlu lwakho, xa uqala ukufaka idatha, eyesithathu, eyesine neyesihlanu imihlaba iya kuvela ngokuzenzekelayo wakwenza oko wafikelela kumhlaba obonakalayo wokugqibela.
kwaye izakuqhubeka ngoluhlobo. Lilonke, ungadibanisa ukuya kuthi ga kuma-255 izinto ezahlukeneyo kwi-Excel. Kwaye ke ungangena eyokuqala.
Cinga ngefomathi yesicatshulwa esidibeneyo. Sifuna igama elipheleleyo elidityanisiweyo ukuba livele njengegama lokuqala-indawo enye-ke igama losapho (okanye igama lokugqibela). Ke ngoko igama lokuqala lifakiwe kumhlaba wokuqala 'Umbhalo 1'. .
Cofa kwiseli enegama lokuqala, kule meko B3. Ogqwesileyo! Kuba ngoku sidinga indawo enye phakathi kwegama kunye negama lokugqibela, siya kungena kwisithuba se-'Text 2 'ngokunqakraza ebaleni kwaye ucofe ibar yendawo, ukuba sicofa indawo ethi' Umbhalo 3 ' , I-Excel iya 'khowudi' isithuba esinye kwifom efunekayo. Ungasibona isithuba kwizicatshulwa ezibini.
Kuya kusebenza okufanayo, ikholoni, okanye naliphi na elinye indawo kumhlaba wesi-2 kwaye uqhubeke, cofa kwindawo ethi 'Umbhalo 3' kwaye ufake icandelo lesibini ngokukhetha iseli C3 equlathe igama losapho. Ukuba ujonga kwicandelo elingaphantsi kwebhokisi yokubhaliweyo ungabona ukuba isicatshulwa sidityaniswa njani kwaye ujonge ifom yokugqibela. Emva kokuba ufake lonke ulwazi olufunekayo, cofa Kulungile.
Umsebenzi omhle! Sidibanise amagama kuluhlu ngaphandle kokubhala ngesandla okanye ukukopa kunye nokuncamathisela. Ukuba ufuna ukuqhubeka nokudibanisa onke amanye amagama kuluhlu, kuyakufuneka uphinde wenze umsebenzi kunye nesalathiso sedatha kumgca ngamnye. Vuka nje ngaphezulu kweseli equlathe umsebenzi kwaye urhuqe ikona esezantsi ekunene yeseli ukuze ugcwalise imiqolo eseleyo ngegama elifanayo kwifomula kuluhlu.
Ke. Kwaye ngaphambi kokuba siyivale, kukho enye into ekufuneka uyiqwalasele. Ukuba ufuna ukutshintsha ulwazi kuluhlu, kuya kufuneka wenze njalo kwiiseli zomthombo ekubhekiswa kuwo kwifomula.
Cofa kuyo nayiphi iseli enamagama adibeneyo kwaye uya kubona ukuba le seli ekujoliswe kuyo ayiqulathanga okubhaliweyo ngokwawo, kulo mzekelo igama elipheleleyo, kodwa umsebenzi kunye nesalathiso kwezinye iiseli etafileni, kunye nendawo enye, esiyiyo beka kwicandelo lesibini, ke ukuba ufuna ukutshintsha nayiphi na idatha eqinisekisiweyo, kuya kufuneka uye kwiseli yomthombo kuqala kwaye uphinde ubhale ulwazi apho. Umzekelo, ukuba sifuna ukutshintsha uTommy ukuba nguJohn siza kuwutshintsha isicatshulwa kwiseli B3, utshintsho luya kubonakala kwiseli D3 enamagama adibeneyo, ukuba ufumene olu qeqesho luncedo, sinike ukufana kwaye ujonge abanye Joyina iincwadana ze-EasyClick Academy zokufundisa. Funda ngokukhawuleza kwaye ngokulula indlela yokusebenzisa i-Excel kude! Ngaba eli lixesha lakho lokuqala kwi-EasyClick? Sijonge ukukwamkela kuluntu lwethu oluku-intanethi.
Ndizidibanisa njani iiseli zibe kumqolo omnye?
Dibanisaisicatshulwa esivela ezibini okanye nangaphezuluiiseli kwiseli enye
Khetha iiseliapho ufuna ukubeka idatha edibeneyo.
Chwetheza = kwaye ukhethe eyokuqalaiseliufuna ukudibanisa.
Chwetheza kwaye usebenzise amanqaku okucaphula ngeukuyaindawo ebiyelweyo.
Khetha oku kulandelayoiseliufuna ukudibanisakwaye ucinezele ukungena.Anifomula yomzekelo inokuba = A2 & '' kunye neB2.
Molo ndinguAndrew ovela kwi-Excel Tactics Calm, kweli nqaku sifunda ngokudibanisa okanye ukudibanisa idatha ukusuka kwimiqolo emininzi kwiseli enye, siqala ngedatha enemigca emininzi eneekholamu ezifanayo nale yeecmmakes kwaye siyidibanise ikoma enye eyahluliweyo Uluhlu loluhlu Njengoko ubona apha, kufuneka sihlele idatha.
Khetha yonke imiqolo kunye neekholamu ngokubamba phantsi kweCtrl kunye neShift kwaye usebenzisa izitshixo zotolo okanye ngokunqakraza utsale ezantsi kwiTebhu yedatha kwaye ukhethe i Uhlobo loQhosha kwimenyu yokuHlela ngezo Zonke iikholamu, ukuqala ngezo ufuna ukuzigcina Kuluhlu oludibeneyo Izilumkiso ezinje azinamsebenzi kwirekhodi yethu, kodwa ukuba irekhodi lakho linamanani kunye nesicatshulwa qiniseka ukuba uyazi indlela yokuzihlela iya kuba luluhlu olusekwe kwi Yenza amagama emodeli kule dathasethi. Yenza ikholamu entsha ebizwa ngokuba ziModeli ukwenza uluhlu lwethu lokwahlula ikhefana. Siza kusebenzisa elula ukuba ingxelo kumqolo wokuqala womzekelo wekholamu cinezela uhlobo olulinganayo ukuba kunye nokuvula i-parentheses ungabona i-Excel ikunceda ngegalelo elifunayo kwibhokisi eyehlayo.
Kuqala kufuneka senze uvavanyo ukubona ukuba ukwenziwa kwesithuthi kulo mgca kuyafana naxa usenza isithuthi kumgca wokugqibela Ukuba oku kuyinyani singongeza le modeli kuluhlu ukuba ukwenziwa kumgca wokugqibela yahlukile kwiBrand eyahlukileyo kulo mgca, oko kuthetha ukuba kufuneka siqale umenzi omtsha kwaye senze uluhlu olutsha ukuze sisebenzise nje lo mgca xa ugcwalise ifomula hit enter njengoko lo iya kuba ngumgca wokuqala we-Acura - Icandelo linjalo. Sibona kuphela igama lokuqala lomzekelo, siya kuyiphinda le fomyula kuyo yonke imiqolo yetafile yethu, cofa kwiseli kunye nefomula ekuyo, Cofa uze ubambe ikona esezantsi ekunene kwale seli kwaye utsale ifomula phantsi kwitafile yakho yonke.
Uyabona ukuba ifomula yenze uluhlu olukhulayo lwazo zonke iimodeli zohlobo ngalunye, ukuqala ngalo lonke ixesha lokufumana uphawu olutsha, ukugcina uluhlu olude, olo luluhlu olunazo zonke izinto ezikulo, kodwa apho luhleliwe , le iya kuhlala iyinto yokugqibela yohlobo ngalunye. Masiqale enye ikholamu yomncedisi ukumisela ukuba yeyiphi into yokugqibela kuluhlu ngalunye lophawu, masibize le kholamu yovavanyo, siza kusebenzisa ingxelo eyahlukileyo ukuba ngaba lo mgaqo awufani nokwenza kolandelayo line, ke le yikholamu yokugqibela, ngapha koko ayisiyiyo kwaye sibeka iikowuti ezingenanto, njengekholamu yokugqibela encedisayo, siya kuyikopa le fomyula ezantsi ndiza kukubonisa indlela emfutshane yekhibhodi ukukhetha yonke imiqolo ngaxeshanye. Kuqala, kopisha ifomula kwiseli oyibhale kuyo, emva koko uye kwikholamu eneenkcukacha kumqolo ngamnye, bamba iqhosha le Ctrl kwaye ucofe utolo olusezantsi ukuya ezantsi kuluhlu lwakho Cinezela utolo lwasekunene ukubuyela umva kwikholam yokujonga, emva koko ubambe Ctrl + Shift xa ucofa utolo oluphezulu kwakhona.
Oku kuya kukhetha zonke iiseli phakathi kokuphela koluhlu kwaye apho ubeke khona ifomula yakho Cinezela u-Ctrl V ukuya kwi-Pop kwaye ifomula iyakuphinda kuyo yonke idolophu yoluhlu lwakho. Eyokugqibela.
Emva koko siza kuhlenga le datha ukuzisa onke amasimi okugqibela, kodwa kuba ezi ziifomula ziya kubalwa kwakhona ngalo lonke ixesha sihambisa imiqolo ukuthintela oku kungenzeki.Siza kukhetha iikholamu zethu ezimbini ezincedisayo kwaye sigcine idatha njengo Cola isicatshulwa endaweni yefomula Khetha zombini iikholamu zoncedo ngekhibhodi yakho okanye cinezela imouse ctrl-c ukukopa le datha Yiya kwi eKhaya isithuba nqakraza utolo olusezantsi ngokuncamathisela kwaye ucofe Cola amaxabiso kumqolo ophakathi yahlala injalo kodwa ngoku iifomula zihambile. Into yokugqibela ekufuneka siyenzile kukuzisa zonke izintlu ezizalisiweyo phezulu ukhethe zonke iikholamu kwitafile yakho enedatha cofa idatha yedatha nqakraza amaxesha ohlobo siya kuba sihlela ngekholamu yokutshekisha kuqala kwaye sitshintsha iodolo ku-Z ukuya kuthi ga kwixesha lokugqibela elibonisiweyo ngaphambi kokuba lingabinanto, emva koko siya kuHlela ngokweMenuow.
Uyabona ukuba zonke iikholamu zokugqibela zivela kuqala, zilandelwe luluhlu lwethu olungaphelelanga apha ngezantsi, kuba sifuna iikholamu zokugqibela kuphela, sinokucima ngokukhuselekileyo eminye imiqolo, sinokucima kwakhona ikholamu yemodeli kunye nekomityi yokujonga, yonke idatha yakho esi sifundo se-Excel yayilinqaku malunga nokuthathwa kwi-Excel Tactics ufunde ngokuzolileyo Amanyathelo ngokuHlola iifomula kwaye Fumana iiTutorials ezitsha ukuba ufumene olu luncedo Cofa ukuthanda eli nqaku kwaye ubhalise kwi-Excel Tactics kwiYouTube ukubona zonke iitayile zethu ezintsha ze-Excel Tactics -Iindlela Awukho ngaphandle kwenkxaso oyithandayo, amanqaku ethu kunye namanqaku ahlala ekhululekile ukuba ubukele kwaye ufunde, kodwa ukuba ufuna ukusinceda senze umxholo omtsha, unokuba ngumxhasi we-Exceltactics kwi-patreon.com
ibhokisi yeethegi yamandla
Ungazidibanisa njani iitafile ezimbini kwi-OneNote Excel?
Ungazidibanisa njani iitafile ze-OneNote? Sika itafile uze uncamathisele kwenye. 1 Ekuqaleni khetha itafile yesibini (okanye vele ubeke isikhombisi kwiseli yetafile yesibini). 2 Cofa indawo ethi 'Sika' kwiTheyibhile ye-GEM '.
Uyenza njani itafile yegem kwi-OneNote?
Itheyibhile yeGem ikakhulu ibonelela nge-OneNote ngesakhono sokudibanisa iiseli. Ukuhlawulela ukungasebenzi kwetafile yendalo ye-OneNote ukudibanisa iiseli. Masisebenzise iiseli ezidityanisiweyo zeGem Table ukwenza itafile kulo mboniso. Kuqala, cofa indawo ethi 'Table' tab - & gt; Itafile - & gt; 5x20, iyakwenza Itafile yeGem eneekholamu ezi-5 kunye nemiqolo engama-20.
Uyenza njani itafile entsha kwi-OneNote?
Ngokwenkcazo yakho, senze uvavanyo kwicala lethu kwaye safumana iziphumo ezifanayo nawe. Kule meko, ungaya kwi-Insert & gt; I-Excel Spreadsheet ekhoyo okanye i-Excel Spreadsheet entsha ukongeza itafile entsha kwincwadi yokubhalela, okanye unokwenza itafile kwi-OneNote emva koko usebenzise i-Convert kwi-Excel Worksheet.
Ukudibanisa njani iiseli kwitafile yegem?
Masisebenzise iiseli ezidityanisiweyo zeGem Table ukwenza itafile kulo mboniso. Kuqala, cofa indawo ethi 'Table' tab - & gt; Itafile - & gt; 5x20, iyakwenza Itafile yeGem eneekholamu ezi-5 kunye nemiqolo engama-20. Emva koko, khetha umqolo wokuqala, kwaye ucofe indawo ethi 'Dibanisa iiseli' ukudibanisa umqolo wokuqala.